आज पुष्पालाल स्मृति दिवस मनाइँदै,को हुन् पुष्पलाल ? « Bikas Times
आज पुष्पालाल स्मृति दिवस मनाइँदै,को हुन् पुष्पलाल ?
काठमाडौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको ४१ औँ स्मृति दिवस आज मनाइँदैछ । दिवसका अवसरमा पुष्पलालको सम्झनामा आज विविध कार्यक्रम गरिने नेकपाले जनाएको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका पुष्पलाललाई नेपालभरिका कम्युनिस्ट पार्टीले सम्झने गरेका छन् । उनले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभाजित भएपनि गतवर्ष एकिकरण गरेको नेकपा अहिले सत्तामा छ । तत्कालिन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकिकरण भएका भएपनि अन्य साना कम्युनिस्ट दलहरु दर्जनौं टुक्रामा विभाजित छन् ।
पुष्पलालले आफू कम्युनिस्ट बन्नुभन्दा पहिले बनारसमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको कार्यालय सचिव भएर काम गरेका थिए । पुष्पलालले वि.सं २००६ मा निरंजनगोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य र नारायणविलाससहित मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए । कांग्रेस छाडेपछि चीनमा भइरहेको क्रान्ति र सफलता, विश्वका देशमा भइरहेको मुक्ति आन्दोलन र दोस्रो विश्व युद्धबारे समेत उनले अध्ययन गरेपछि नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको आवश्यकता महसुस गरी नेकपा स्थापना गरेका थिए ।